एकै झड्कामा आगनमा खेलिरहेका ४ बच्चाको मृत्युपछि बन्ध्याकरण उल्ट्याएर भाग्यलक्ष्मीले जन्माइन् तीन सन्तान – NepalajaMedia
February 17, 2021 93
काठमाडौं । स्वास्थ्य विज्ञानलेपनि यो दुनियाँमा असम्भव भन्ने केही छैन भन्ने कुराको प्रमाणित गरिदिएको छ । केही घटना हेर्ने हो भने विश्वका कोही मानिसलाई विश्वास नै लाग्दैन । शान्ति र उनको माझी पति स्वामीनाथन तमिलनाडुको तटीय गाउँ मामेद्डूमा तीन सन्तानसहित बस्छन् । यी बच्चाहरूको जन्म आमाबाबुहरूको लागि कुनै चमत्कार भन्दा फरक छैन ।
बच्चाहरुको जन्म अघि शान्तिको बन्ध्याकरण गरिएको थियो । तर फेरि गर्भवती गराउनका लागि १५ वर्ष अघि उनको बन्ध्याकरण उल्टाउन शल्यक्रिया गरियो । यस शल्यक्रियाको कारण हिन्द महासागरमा २६ डिसेम्बर २००४ मा आएको सुनामी थियो ।
जसमा ती दम्पतिका सबै चार बच्चाको मृत्यु भयो । त्यस दिन बिहान आठ र साढे आठ बजे शान्तिले हरेक दिनजस्तै घरका कामहरू गरिरहेकी थिईन् । उनीहरूका बच्चाहरू, पाँच वर्षीया छोरी चेरन, चार वर्षको छोरा चोलन र एक वर्षको जुम्ल्याहा सतीश र शशिदेवी नजिकै खेलिरहेका थिए । शान्तिको श्रीमान् स्वामीनाथन पनि माछा पक्रिन गएका थिए ।
अर्को पलमा भएको घटनाले यस दम्पतीको जीवनलाई परिवर्तन गर्यो र हजारौं मानिसहरु दक्षिण भारतको तटीय क्षेत्रमा सदाका लागि विलिन भए त्यसमा यो परिवारपनि पर्यो । शान्तिले लाखौं प्रयास गरे पनि आफु बाहेक आफ्ना बच्चाहरूलाई सुनामी छालबाट बचाउन असफल भएको बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘पानी जताततै थियो, छालहरू यत्तिको बलियो थिए कि इट्टाको पर्खालहरू भत्किए । म घर भित्र थिए । पानी यति चाँडो आयो कि त्यसले मबाट मेरा छोरा–छोरीहरू समात्यो । म आफै छालहरूसँग संघर्ष गरिरहेको थिएँ, यस्तोमा म कसरी बच्चाहरूलाई बचाउन सक्थे ?’
त्यस बिहान भाग्यलक्ष्मी आफ्ना तीन बच्चाहरुसमेत तामिलनाडुको नागपट्टिनम शहरको समुद्री किनार नजिकै उनको घरमा थिइन्, जबकि उनका पति शक्तिवेल माछा पक्रिदै थिए । भाग्यलक्ष्मीलाई आज पनि याद छैन कि सुनामी आउँदै गर्दा के भइरहेको थियो ।
उनी भन्छिन्, ‘बच्चाहरूलाई नुहाइसकेपछि म नुहाइरहेकी थिएँ । पानी कतिबेला आयो मलाई थाहा भएन । म के हुँदैछ भनेर केहि सोच्न सकेन । केही समय पछि, मलाई थाहा भयो कि मेरा बच्चाहरू रहेनन् । तर मलाई त्यसबेला केही पनि थाहा थिएन ।’
उनका श्रीमान बिहान, शक्तिवेल माछा लिन समुद्रमा गएका थिए । कुनै किसिमले उनले आफूलाई बचाए, जब उनी घर फर्के, सबै कुरा बर्बाद भइसकेको थियो । उनकी श्रीमती बचेकी थिइन, तर उनका बच्चाहरुले सुनामीसँगको लडाँई जित्न सकनेनन् । उनीहरूले आफ्ना बच्चाहरूको लाश पनि फेला पार्न सकेनन् ।
समुद्रको प्रकोप केही मिनेटमा कम भयो, तर त्यहाँ मौन, निराशा र उदासिनता मात्र बाँकी थियो । शान्ति, भाग्यलक्ष्मी र उनीहरूको सुनामीबाट प्रभावित धेरै महिलाहरूले यस त्रासदी हुनु भन्दा पहिले बन्ध्याकरण गरेकी थिइन् । यसरी बच्चाहरुलाई सुनामीमा गुमाउनु परेको दुर्घटनाले उनीहरूलाई झनै निराश बनायो ।
यी परिवारहरू फेरि उनीहरूको घर र आँगनमा बच्चाहरू खेलेको हेर्न चाहान्थे । भाग्यलक्ष्मी भन्छिन् कि उनका पति शक्तिवेलले पनि जीन्दगीबाट हार खाएर आफैलाई विदा गराउन खोजेका थिए । उनले भनिन्, ‘हाम्रा बच्चाहरूको मृत्युले हामी सम्हालिन सकेका थिएनौँ ।
मेरो श्रीमानले आफैपनि विदा हुने प्रयास गरे हामीले उनलाई अस्पतालमा भर्ना गर्यौं । उनको अवस्था एकदम गम्भीर थियो । त्यसपछि हामीले सोच्यौं कि हामीले डाक्टरलाई भन्नु पर्छ कि हामी आफ्नो बच्चा चाहन्छौं । हामी डाक्टरकहाँ गयौं । तिनीहरूले हामीलाई आश्वासन दिए कि म फेरि गर्भवती हुन सक्छु ।’ यस विश्वासको कारण रिकानलाइजेशन शल्यक्रिया थियो अर्थात् शल्यक्रिया जुन बन्ध्याकरणलाई उल्ट्याउन गरिन्छ ।
भाग्यलक्ष्मीलाई यस शल्यक्रियाको बारेमा राम्रो जानकारी थिएन । सुनामी पछि उनी नागापट्टिनममा एउटी महिला डाक्टरकहाँ गइन्, जसले यस शल्यक्रिया बारे जानकारी पाइन् । नभन्दै शल्यक्रियापछि भाग्यलक्ष्मीलाई फेरि आमा बन्ने मौका मिल्यो । आज भाग्यलक्ष्मी र शक्तिवेलका तीन सन्तानहरु रहेका छन् ।
उनीहरुका दुई छोरी र एक छोरा छन् । शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकहरुमा चिदम्बरम शहर निवासी डा. बी. नीलकन्दन पनि रहेका थिए । उनका अनुसार सुनामी पछि पीडितहरुलाई उपचार गर्न राहत शिविरमा पुग्दा उनीहरुले पनि निःसन्तान मानिसहरुको पीडा महसुस गरेका थिए । उनी भन्छन्, ‘राहत शिविरबाट फर्केपछि म सोचिरहेको थिएँ कि त्यहाँ पर्याप्त चिकित्सा सहयोग जरुरी छ ।
यस्तो अवस्थामा म कसरी उनीहरूलाई डाक्टरको रूपमा सहयोग गर्न सक्छु ? त्यसपछि मलाई केहि वर्ष अघि कुम्भकोनामा घटेको घटना सम्झना आयो, जसमा धेरै बच्चाहरू एउटा स्कूलमा आ’गला’गीपछि धेरै बच्चाहरुको मृत्युभएको थियो ।’ उनी थप्दै भन्छन्, ‘मैले विद्यार्थीका आमाबाबुहरुको रुवाबासी टिभीमा देखेको थिएँ, जसले भनिरहेका थिए हामीले बन्ध्याकरण गर्यौ, अब हामी कसरी बच्चाविना कसरी बाँच्नेछौं ? सुनामी पछि मलाई यस्तो विचार आयो कि म भासिटोमी रिभर्सल शल्यक्रिया किन गर्न सक्दिन् ? ताकि उनीहरू फेरि गर्भवती हुन सकून् ।’
डा. नीलाकानन्दले त्यसपछि यी शिविरहरूमा बस्ने मानिसहरूलाई सन्देश पठाए कि जोडी जो शल्यक्रिया गर्न चाहन्छन्, उनीहरूले तिनीहरुका लागि निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने बताए । एक वा दुई शल्यक्रियाहरु सफल भएपछि, यो कुरा अधिक व्यक्तिमा पुग्यो र त्यसपछि बच्चाहरूको इच्छुक जोडी उनीहरू नजिकैका गाउँहरू र नागापट्टिनम जस्ता टाढाको शहरबाट आइपुगेका थिए ।
अर्को एक वा दुई महिनामा ६५ देखि ७० महिलाहरू डाक्टर नीलाकन्दनको सम्पर्कमा आइपुगेका थिए । उनीहरूले ४० देखि ४५ महिलाको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक गरेका थिए । शल्यक्रिया सफल भयो कि भएन भनेर जान्नको लागि, उनले केही महिना पछि एउटा निःशुल्क शिविर आयोजना गरेका थिए । तिनीहरूले पत्ता लगाए कि लगभग ४० महिला मध्यमा ३० महिलाको सफल रिकनेलाइजेशन शल्यक्रिया भएको थियो ।
यस शल्यक्रियाका लागि डाक्टर नीलाकन्दनलाई भेट्ने महिलाहरू मध्ये शान्ति पनि एक थिइन् । तर शल्यक्रिया सफल हुँदा पनि जब शान्ति गर्भवती हुन सकिनन्, तब उनको डाक्टर नीलाकानन्दले उनको आईवीएफ अर्थात् टेस्ट ट्यूब बेबीलाई सल्लाह दिएका थिए । जब यो विधि पनि असफल भयो, तब शान्तिको आशा पूर्ण रूपमा समाप्त भएर गएको थियो ।
अचानक केहि महिना पछि शान्तिलाई थाहा भयो कि उनी गर्भवती छिन् । शान्ति भन्छिन्, ‘मलाई गर्भवती भएको कुरा पनि थाहा थिएन । म पहिले जस्तो राम्ररी खान र पिउँदै थिइन । जब म डाक्टर नीलाकन्दनकहाँ जाँचको लागि गएँ, मलाई थाहा भयो कि म गर्भवती छु । मेरो खुःशीको सीमा थिएन ।’
आफैं विज्ञानसँग जोडिएको भए पनि डा. नीलाकन्दन मान्दछन् कि फेरि गर्भवती हुनु भनेको शान्तिको विजय हो, चिकित्सा विज्ञानको होइन । उनी भन्छन्, ‘कारण सायद विश्वास नै हो । हेर, सबै राम्रा मानिसहरू हुन्, सबैले भगवानको आराधना गर्छन् । त्यसो भए सुनामी जस्तो प्रकोपको कारण किन लाखौं मानिसहरूको मृत्यु भयो ? मलाई लाग्छ यो फेरि गर्भवती हुनु भगवानको इच्छा हो । म उनको चाहना पुरा गर्नका लागि एक माध्यम मात्र थिएँ ।’
आज शान्ति, स्वामिनाथन, भाग्यलक्ष्मी, शक्तिवल र उनीहरू जस्ता सयौं व्यक्तिहरू आफ्नै तरिकाले सुनामीलाई खराब सपनाको रूपमा बिर्सिसकेका छन ।
शक्तिवल भन्छन्, ‘प्रत्येक वर्ष २६ डिसेम्बरमा मानिसहरूका मृत्युलाई श्रद्धाञ्जलि दिन जान्छन, तर म त्यस्तो गर्दिन । मेरो परिवार जान्छ तर म जाँदिन् । म पुरानो सम्झनाहरु बिर्सने कोशिस गर्दैछु ।’ हिन्द महासागर सुनामी पछि, पुनः पुनरावर्तन सञ्चालन धेरै जोडीहरूलाई फेरि अम्मा–अप्पा’ भन्ने शब्द सुन्न पाएका हुन् ।
१५ बर्ष अघि यी दुःखहरुको पीडा कम हुन सक्छ, तर यो पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । शान्ति भन्छिन्, ’हो, म ती बच्चाहरुको बारेमा सोच्दछु, जब म तिनीहरूलाई सम्झन्छु र रुन्छु । ती बच्चाहरूले मलाई घेरेर अम्मा किन रोइरहेकी भनेर सोध्थे । म तिनीहरूलाई केहि पनि भन्दिनँ । म केवल मेरो आँसु थाम्छु ।’
Nextआफ्नो श्रीमानलाइ छोडेर फेसबुकमा लब परेको के’टा स’ङ्ग भा’ग्दा मुम्बईमा बे’चिन पुगिन बिमला